Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): March 2015
at 3/31/2015 06:28:00 PM
at 3/31/2015 06:27:00 PM
at 3/28/2015 09:25:00 AM
Moi de jiwoi jiwa prat kaw kaji kajaw gasat lai mat sai labau ni hpe gaw n ka sai. Nambat (2) Mungkan majan kaw nna byin wa ai mung masa lam ni hte hpyen masa nkau ni hpe tang madun mayu nngai.
Inglik ni Myen hkawhkam hpe hpang jahtum woi mat nna Myen Mung hpe dang madu la sai ngu ai ten hta anhteagumchying gumsa Du niashara de garai n lawm shi ai rai nga ai (South, 2008) Dai majaw, anhteaGumchying Gumsa Du ni up ai shara gaw Myen Hkawhkamanpu kaw n re lam labau hta dandawng nga sai.
Nambat (2) Mungkan majan hta anhte Asha Mungdan hta gaw Japan hte Allied forces (American & English) niamajan re lam Mungkan ting chye chyalu rai nga ai. Raitim, anhte kata kaw kadai n chye shi ai manghkang ni nga taw ai.
Japan ni Asha Sinpraw-Dingda (Southeast Asia) de du shang wa ai shaloi, Thai Mungdan (Siamese), Bangkok kaweMyen Jawngma ningbaw Aung San wa woi awn ai Jawng ma hpung ni gaw BIA (Burma Independence Army) ngu ai Hpyen Dap hpe 1941 ning kaw hpaw hpang wa masai. 1942 ning Myen Mung de Japan ni gasat shang wa ai shaloi dai BIA ni mung gasat lawm ma ai. Myen Mung de gasat ai ngu ai hta e, Japan ni gaw English hpe madung dat gasat ai raitim, BIA ni gaw Hpu nau Karen ni hpe madung gasat ma ai. Bai nna, Hkristan ni hpe Shan hpraw niamasha re ngu nna mare ting ting sat nat lai wa masai. Grau nna gaw Eyarwaddy Zinlawng hkanebyin lai wa ai Karen Mungchying shawa ni hpe sat sharu ai poi htaeBIAadap lakung ni lawm nna, ahkyak kaba Karen Mung masa ningbaw ningla langai mung lawm mat ai rai nga ai. (Aung, 1967, P-302, 315, KNU 2012).
Ndai zawn Hkristan Uhpung uhpawng ni hpe Shanhpraw masha (Westerners) niaShingnan Masha (Tabye) ngu ai hku nna masat let gasat wa ai gaw anhte Kachinland de du shang wa sai. Nnan du ai shaloi, Kachin Duwa ni mung Japan hpe nnan daw hkap hkalum la ma ai. Raitim, anhte hpe roirip ai lam amyu myu byin wa sai. Dai ten anhte wuhpung hta Nat Jaw hte Hkristan uhpung lahkawng re shaloi, hpaji chye grau ai ni gaw Hkristan ni rai nga ai. Dai majaw, Englik asuya prat hta Asuya magam gun ai malawng maga gaw Hkristan ni tai taw ai. Dai majaw, Hkristan ni hpe madung dat nna hpyen shatai wa ai rai nga ai. Nawngnang kaw e, Ma kaji ni hpe hpun ntsa lung shangun nna, Woi law.. woi law.. ngu marawn let sinat hte gap shama da nna, jawm mani, re ai baw arawn alai ni gaw anhte hpe ninghkap gasat na matu n-gun jaw wa sai rai nga ai.
Dai majaw, American CIA ni woi awn let American-Kachin Rangers ngu ai hpyen dap hpe1942 ning April 14 hta hpaw hpang nna Japan ni hpe shingla gasat hpang wa masai.1942 ning kawn gasat wa ai Japan majan hta e, Japan hpyen la ni sha n rai, Gen. Aung San wa woi awn ai BDA (Burma Defence Army) ni hte mung gasat ra ai rai nga ai. Dai ten kaw na Myen hte majan byin hpang sai rai nga ai. Anhte amyusha ni 1942 ning kawn Japan hpe gasat nga ding yang hta, lawu ga de gaw 1943 ning August 1 ya shani Dr. Ba Maw hte Gen. Aung San wa woi awn nna Japan Asuya kata kaw Myen Mung shanglawt ndau masai. Dr. Ba Maw gaw Hkringmang Daju rai nna, Gen. Aung San gaw BDAaHpyen Daju Jum (CS) rai nga ai. Ndai Japan prat na Myen Mung Shanglawt ndau ai kaw mung AnhteaMungdaw n lawm nga ai. Anhte gaw 1942 kawn 1945 du hkra matut manoi Japan Hpyen Dap hte Myen BDA ni hte gasat nga ding yang rai nga ai.(Crisisgroup, 2011)
Anhte ni Japan hte BDA ni hpe gawt shapraw kau ngut ai nna Zinlum kaba kaw padang manau poi galaw ngut ai hpang, 1945 March shata hta she Myen ni Japan hpe gasat sai lam ndau dat ma ai. Dai hpe gaw Anti-Fascist People’s Freedom League (AFPFL) ngu nna ya du hkra Japan gasat ai labau hku sharin nga ma ai.
Kachin Ranger Hpyen Dap hpe gaw 1945 July 12 hta majan ngut sai (mission completed) majaw dap shabra (discharged) kau nna tinang buga de tinang bai wa masai. (CIA 2007).
Inglik ni Myen Mung na gan koi yen ai ten Myen Mung hte seng ai Inglik Asuya gaw India Mungdan Simla kaw rung jung da ai ten rai nga ai. Ndai zawn Japan majan laman lawu Myen Mung masha ni hte anhte amyusha ni (Sama Duwa ni hta lai nna) yawng gasat hkat ai hpe Simla rung kaw na Governor Reginald Dorman-Smith wa gaw Myen Mung Shanglawt jaw ai shaloi matut nna manghkang n byin na matu Simla White Paper of 1945 masing hpe ka lajang da nu ai. Dai gaw tinang shara hpe tinang uphkang lu na mung masa pinra langai hpe gyin shalat na matu rai nga ai.
Dai majaw Gen. Aung San wa gaw Jinghpaw Mung de adingtawk lung wa nna Japan maga lawm ai Sama Duwa Sinwa Nawng hpe sa hkrum sai. Jinghpaw Du ni law malawng gaw Myen hte pawng na n hkraw ma ai. Raitim, Sama Duwa mala shala pawt nna tsun wa ai majaw, shada da ga li ga law n kam byin nna Panglong Ga Shadi kaw lekmat htu lawm sai rai nga ai. (South, 2008). Panglong Ga Sadiamadung gaw tinang Mungdaw madu uphkang lu na ahkaw ahkang hpe pahkam hkam ai lam rai nga ai. Myen Mung Shanglawt la ai shaloi anhte gaw Myenanpu taw na matu n rai, tinang nan myit hkrum nna, rau nga na matu ga sadi tawn ai lam rai nga ai. Dai hpe Myen ni ga sadi run ai majaw, ya na zawn majan n zim hkraw mat ai rai nga ai. (Lian, Z. 2012, Sakhong, L.H. 2012).
Lama na anhteaNingbaw Ningla ni Myen ni hte shanglawt jawm la na matu myit n hkrum lawm ai rai yang, dai ni anhte Mungdaw gaw Myen Mung kata kaw n rai na sai. Anhte gaw New Zealand, Australia zawn re ai EnglandaCommon-Wealth mungdan langai hku rai mat na rai nga ai. Myen ni Jum n shalai ya yang Jum n lu sha na sha chye tsang ai anhteaDu niamachye machyangamajaw mung rai nga ai.
-Aung, M. H. (1967). A History of Burma. New York: Columbia University Press.
CIA. (2007, May 8). Intelligence Operations of OSS Detachment 101. Retrieved from Central Intelligence Agency: http://goo.gl/AoIvg9
- Crisisgroup. (2011). Myanmar: A New Peace Initiative. Jakarta/Brussels: International Crisis Group, Working to prevent conflict worldwide.
-KNU. (2012, October 7). KNU History. Retrieved from Karen National Union:http://goo.gl/q7JNgB
- Lian, Z. (2012). Institutional Design for Divided Societies, A Blue-pint foramulti-ethnic Burma. Chiang Mai: The Burma Centre for Ethnic Studies, Chiang Mai University.
- Sakhong, L. H. (2012). The Dynamic of Sixty Years of Ethnic Armed Conflict in Burma. Chiang Mai: Burma Centre for Ethnic Studies, Peace and Reconciliation.
- South, A. (2008). Ethnic Politics in Burma, States of conflict. New York: Routledge.
at 3/26/2015 09:32:00 AM
Mung Lai Hkyet
တရုတ်က ဗမာ ကို လက်နက်ရောင်းပေး /တရုတ်ကို ဗမာ က ၅ လောင်း နဲ့ ၈ ဦး ဒါဏ်ရာ ရ အောင် ပြန်ကျေးဇူးဆပ်လိုက်တာ။
ဗမာ က တရုတ်ရောင်းပေးတဲ့ လက်နက် ကောင်းမကောင်းစမ်းကြည့်လိုက်တာ တရုတ် ၅ ဦးသေ ပြီး ၈ ဦးတောင် ဒဏ်ရာ ရသွားတယ် ဆိုတော့ တရုတ်မိတ် လည်း ကောင်းတယ် လို့ ပြောရ မှာပေါ့။ တရုတ်တွေ နောက်လည်း ရောင်းပေး အုံး ပီကင်းအထိ ပစ် လို့ရတဲ့ဟာလည်း ရောင်းပေး အုံး ဗမာက စမ်းပစ်ဖူးချင်နေပြီ။ ဝမ်စွေ့ဝမ်စွေ့ဝမ်ဝမ်စွေ့
People's Liberation Army conducted military excercise in the border.
at 3/26/2015 09:24:00 AM
at 3/24/2015 06:55:00 PM
Tsawra Tsaw's photo.
ကျွန်တော်တို့ကို ပြည်ထောင်စုနေ့ ညစာစားပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာပို့ထားတယ်။ (ဖေဖရီလ ၁၂) ညနေ ၆း၃၀မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဇနီးက တည်ခင်းဧည့်ခံတဲ့ ညနေစာစားပွဲကို ကျွန်တော်တို့ဘက်က နှစ်ယောက် တက်ရောက်ဖို့ရန် ဖိတ်ထားတာပါ။
ဒါပေမယ့် သမ္မတနှင့်ဇနီးက ညစာတည်ခင်းကျွေးမွေးမယ့်ကိစ္စကို ကမ္ဘာကို သတင်းလွှင့်လိုက်တာက ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ တကယ့်ကို အရေးကြီးတဲ့ စည်းဝေးပွဲကြီး တစ်ခုပဲ ကျင်းပတော့မယ့်အသွင်၊ အားလုံးကသဘောတူပြီး အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကိုပဲ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ် လက်မှတ်ထိုးတော့မယ့်အသွင်၊ ယခုညကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ ညစာစားပွဲဟာ အင်မတန်အရေးကြီးပြီးတော့ အခမ်းအနားကို မတက်ရောက်တဲ့ အဖွဲ့က ငြိမ်းချမ်းရေးကို မလိုလားအပ်တဲ့အသွင်။
တကယ့်တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ကို လိုင်ဇာကနေ နေပြည်တော်ထိ ဆင်းလာပြီး ညစာတစ်နပ်လာစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ ကိစ္စသာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဘက်ပေါင်းစုံကနေစဉ်းစားတဲ့ အတွက် ညစာတော့ လာမစားတော့ပါဘူး ဒါပေမယ့် (၆၈)ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ချက် တစ်စောငကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေးပါမယ်၊ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စကိုပဲ လုပ်ပါမယ် တစ်ခြားအကြောင်းအရာ option B, option C ကိုမလုပ်နိုင်သေးပါ။ ခုချိန်မှာမလုပ်သေးပါ။ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စကို ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ဖို့ရန် အမြဲအဆင်သင့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ကို အမြဲတမ်းလိုလို ငြိမ်းချမ်းရေးမလိုချင်တဲ့အဖွဲ့ အဖြစ်နဲ့ အမြဲတမ်းပြောလေ့ရှိကြတဲ့အတွက် ခုတခေါက်ဆွေးနွေးပွဲကို အမြဲတမ်းဗဟိုကော်မတီဝင် (၃) ဦးအပါအ၀င်၊ ဗဟိုကော်မတီဝင် (၈)ယောက် ဆင်းလာပါတယ်။ ခုကော မယုံမကြည်ဖြစ်နေကြတုန်းလား ကျွန်တော်တို့ ဒီမေးခွန်းကို မေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အားလုံးရှေ့မှောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုက်ပွဲကို မလိုလားပါဘူး တိုက်ပွဲတွေကို ရပ်တန့်ပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ တပ်ချုပ်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ပြောခဲ့ပါတယ် “အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုိးပြီး နောက်စစ်ပွဲအတွက် စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေကို မလုပ်ချင်ပါဘူး”
တပ်ချုပ်ကြီးကလည်း ပြန်ပြောပါတယ် “အဲ့ဒီစကားကတော့ ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်ချမ်းသာသွားပါပြီ”…….တဲ့။ အဲ့ဒီကနေ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်မှာ ဆွေးနွေးပွဲပြန်လုပ်ပြီး (၃)ရက်မြှောက်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုးဆီကို တပ်ချုပ်ကြီးကနေ ဖုန်းနဲ့လှမ်းပြောတာ “ကေအိုင်အိုနဲ့တွေ့ရတာ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်”……..တဲ့ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုသာပြောနေတာ လေယျောဉ်တွေနဲ့တော့ လာတိုက်နေဆဲ (ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် လူထုနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောတဲ့နေ့ပဲ (မတ်လ ၂၂ရက်)နေ့ကပဲ ကေအိုင်အေတပ်စခန်းကို အစိုးရတပ်မှ လေယျာဉ်ဖြင့် လာရောက်တိုက်ခိုက်တာကို ရည်ညွန်း)။ ဒီနေ့လည်း လေယျာဉ်နှစ်စီးနဲ့လာတိုက်တယ်တဲ့ မိဘပြည်သူများ သတင်းကြားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ တော်တော်ခေတ်မှီတယ်ပဲပြောရမှာပါ။ အစ္စရေးလ်နဲ့ အီဂျစ်လိုပေါ့။ တစ်ဘက်မှာတော့ ဆွေးနွေးတဲ့လူကလည်းသူ့တာဝန်သူထမ်း ဟိုဘက်မှာ ဒူကဘာ့အောင်ဆိုင်းလာတို့ကလည်း (ရှေ့တန်းမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ဖစ်ဟန်ရှိသူကို ရည်ညွန်း) သူတို့တာဝန်ကိုယ်ထမ်းနေကြရတယ် (ပြောပြီးသဘောကျစွာ တဟားဟားရီနေလေရဲ့)။ ဟိုဘက်တိုက်လိုက် ဒီဘက်တိုက်လိုက်နဲ့ ဆွေးနွေးနေကြရတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပါ။
၂၂ရက် မတ်လ ၂၀၁၅
ရန်ကုန်ကချင်လူထုနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှ ပြောကြားချက်အချို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
(ကချင်လိုပြောထားတာကို ဗမာလိုပြန်ရေးထားတဲ့အတွက် အဓိပ္ပာယ်လွဲမှားမှုမရှိအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ရေးသားထားပါသည်။ အသုံးအနှုန်းတချို့လွဲမှားနေတာရှိပါက ဘာသာပြန်သူ Tsawra Tsaw ၏အမှားသာဖြစ်ပေမည်။)
at 3/23/2015 11:02:00 AM
စစ်ပြီးခေတ် အာရှခေါင်းဆောင်တွေအနက်က ထူးချွန်ထက်မြက်ဆုံး အာရှခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလို့ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ စင်္ကာပူကျွန်းနိုင်ငံလေးကို ကမ္ဘာ့ ထိတ်တန်းနိုင်ငံတနိင်ငံဖြစ်လာအောင် ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့ စင်္ကပူ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း လီကွမ်ယုရဲ့ ဘဝကောက်ကြောင်းတစေ့တစောင်းကို ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်၊
လီကွမ်ယုကို စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက်၊ ၁၉၂၃ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အဖိုးအဖွားတွေက တရုပ်ပြည်ကြီးကနေ့ စင်္ကာပူကို ကူးပြောင်းလာကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အခု နီးလ်လမ်းလို့ လူသိများတဲ့ ဒီဓါတ်ပုံထဲက နေအိမ်မှာခေတ္တနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်က စင်္ကာပူဟာ ဗြိတိသျှအင်ပါယာအောက်မှာ ရှိသေးတာမို့ လီကွမ်ယုဟာ ဗြိတိသျှနိုင်ငံသားဖြစ်သလို မိခင်ဘာသာစကားကလည်း အင်္ဂလိပ်စကားဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာတရုပ်စကားကို အသက်၃၀ ဝန်းကျင်မှသာ သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကျောင်းနေခဲ့တဲ့လီကွမ်ယုဟာ အတန်းထဲမှာ စာအတော်ဆုံးကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးစတင်ဖြစ်ပွားလာချိန်မှာ လီကွမ်ယုဟာ သူမူလရည်မှန်းသလို အင်္ဂလန်ကို ပညာတော်သင်သွားမယ့်အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
Sook Ching လူသတ်မူကြီး
၁၉၄၂ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှာဂျပန်က စင်္ကာပူကို ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ရာမှာ ဗြိတိသျှတပ်တွေမခုခံနိုင်ပဲ လက်နက်ချ အညံ့ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဂျပန်လက်ထဲ စင်္ကပူကျသွားတဲ့အခါမှာ အသက်၁၈မှ ၅၀ အရွယ် တရုပ်အမျိုးသား တွေကို ဂျပန်ကင်ပေတိုင်စစ်ပုလိပ်တွေက ဖမ်းစီးစစ်ဆေးပြီး ဂျပန်ဆန့်ကျင်သူလို့မသင်္ကာသူ မှန်သမျှကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်စစ်ပုလိပ်တွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ အသတ်ခံရတဲ့သူ ၅၀၀၀၀ ကနေ တစ်သိန်းအထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ လီကွမ်ယုက ဂျပန်ကင်ပေတိုင်လက်က သီသီလေးလွတ်လာခဲ့ပါတယ်။
“The prime minister is deeply grieved to announce the passing of Mr. Lee Kuan Yew, the founding prime minister of Singapore,”astatementposted on the prime minister’s official website said. “Mr. Lee passed away peacefully at the Singapore General Hospital today at 3:18 am.”
Mr. Lee was prime minister from 1959, when Singapore gained full self-government from the British,
နှစ်ပေါင်၆၀လုံးလုံး တိုင်းရင်းသားတွေကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတပ်မတော်ပါ.... နိုင်လို့လား
at 3/20/2015 02:50:00 AM
?ပြည်တွင်းစစ်မှာ တပ်မတော်က ၁၉၉၂ ပါဂျောင်တိုက်ပွဲမှာ Helicopter 3စီး စသုံးခဲ့တာနော်....
20011-2013 ..KIA နှင့်ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲမှာ Russia(ဗိုက်နီ) Jetfigther ပုံမှန်နှစ်စီးနှုန်းနှင့် ၃၁၇ကြိမ်၊
2half,57,60,75,85,105,120mm အားလုံးအလုံးရေစုစုပေါင်း 476202လုံး,
စစ်အင်အား ၃သောင်းကျော်(6743 ယောက်ကျ)
2014 kokang data မပါသေးဘူးနော်....hhhhh ဗမာငပိန်းတွေ သိစေချင်လွန်းလို့သာတင်ပြပေးရတာပါ...စိတ်တော့မကောင်းချင်ဘူးပေါ့နော်...hhhhh
Hka Kamai Hka Kamai
Manang nieya yangeMyen hpyen dap ka ta hkan gaw n dai hku re da lol....
Lahta sam mung Dap ba 4, Kukang, hte hpu nau Palawng niagin ra de majan rawt ai hpyen dap sha gu n dai hku re da lol....
By FB Gauri Zau Hkam